Ekhabar24 चिकित्सा क्षेत्रका माफियालाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने डा. केसीको चेतावनी - Ekhabar24
चिकित्सा क्षेत्रका माफियालाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने डा. केसीको चेतावनी
काठमाडौं : सोमबार चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि डाक्टर गोविन्द केसीले नयाँ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यस क्षेत्रमा माफियाको चलखेल भएमा कडा रुपमा सत्याग्रहमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले ५ बुँदे मागसहित उक्त कुरा जानकारी गराएका हुन् । यमनको ३ महिने लामो बसाइबाट फर्केपछि डाक्टर केसीले नयाँ सरकारलाई उक्त कुराको खबरदारी गराएका हुन् ।
केसी चिकित्सा क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै विगतमा पटक–पटक आमरण अनशन बस्दै आएका छन् । आफू त्यस विषयमा निरन्तर लागि पर्ने डा. केसीले बताएका छन् । कोरोना महामारीका बेला देशमा रहेर सेवा गर्न नपाएकोमा उनले दुखेसो पोखे। केही महिनायता उनी यमनमा रही निशुल्क सेवा गरी नेपाल फर्किएका हुन्। विपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनको सबै माग पूरा हुनुपर्ने भनाइ केसीले विज्ञप्तिमार्फत राखेका छन् ।
यस क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको मेडिकल माफियाको चलखेल नरोकिएको उनले बताएका छन् । कठोर आन्दोलन तथा सत्याग्रहबाट माफियालाई जनतासामु घुँडा टेकाउने बाचा डा.केसीले गरेका छन् । ‘चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि अझै कठोर भई आन्दोलनमा जानेछौँ’ केसीले भनेका छन्, ‘नेपाल मेडिकल कलेजमा भइरहेको माफियाको मनपरीलाई जरैदेखि उखाल्ने छौं ।’ उनले आफू नेपालको चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सदैव लागी पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।